Konami Oo La Laabatay Heshiiskii Ay Kula Jireen Griezmann – Garsoore Sports
Konami Oo La…
Weeraryahanka kooxda Barcelona Antoine Griezmann ayaa la kulmay in la joojiyo heshiiskii uu kula jiray shirkadda Konami ee soo saarta cayaar gacameedka kubbada-cagta ee PES.
Muuqaal dhowaan ku baahay baraha bulshada oo la duubay sannadkii 2019 markii cayaartooyda Barcelona ay ku sugnaayeen magaalada Tokyo ee dalka Japan safar qeyb ka ahaa isku diyaarintoodii xilli-cayaareedkii 2019-20 ayaa lagu arkay in Griezmann iyo Dembele ay ka xaraabeeysteen shaqaalihii hoteelka oo isku dayayay inay u hagaajiyaan telefeshinka.
Griezmann ayaa yiri: “Dhammaan wajiyadaan foosha xun, kaliya si aad u ciyaarto PES [Pro Evolution Soccer], miyaadan xishooneyn?” Wejiyada foosha xun wuxuu ula jeeday telefeshinka.
Dembele ayaa intaas kaddib raaciyay: “Waa maxay luqadda dib udhaca ah taasi?” iyo “Ma tiknoolajiyad bay ku hormarsan tahay waddankaaga mise?”
Labada cayaaryahan ayaa raaligelin bixiyay, iyagoo ku adkeysanaya in ficilladooda aysan aheyn cunsuriyad. Si kastaba ha noqotee, sida ay qortay Marca, taasi kama joojin Griezmann inuu lumiyo wada shaqeyntii uu la lahaa Konami.
Wuxuu la saxeexday shirkadda madadaalada dijitaalka ah ee Japan dhawr bilood kahor iyagoo u doortay safiirkooda cayaar gacameedyadda. waxaana lagu waday inuu kor u qaado labadaba cayaar gacameed ee ee PES ee soo socoda iyo sidoo kale cayaaraha taxanaha ah ee Yu-Gi-Oh!
TOOS: Ingiriiska vs Denmark |Semi-finalka Euro 2020 | Yaa Adkaan Doona